Igumbi elinelanga elikufutshane neyunivesithi - I-Airbnb
Igumbi elinelanga elikufutshane neyunivesithi
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguAndreas
Igumbi elimnandi (elimalunga nama-20m²) elifumanekayo kwigumbi elithuleyo elikumgama wokuhamba (ungekho ngaphezu kwemizuzu eli-15 yokuhamba) kumbindi wekhampasi, iklinikhi yaseyunivesithi kunye nombindi wesixeko.
Igumbi eliqaqambileyo libonisa iifestile ezijonge emazantsi nasentshona kwaye ilungele iindwendwe ezindwendwela iyunivesiti okanye ikliniki. Ikhampasi esemantla inokufikelelwa lula ngebhasi. Ekubeni abamelwane kwesi sakhiwo bethanda ukuzola, yeyona ndawo ifanelekileyo yokusebenzela ekhaya okanye yokulala. Nokuba igumbi linabantu abaninzi, nceda uzive ukhululekile ukubuza kuba sisoloko sisifumana isisombululo ukuba sikhona. okanye ubusuku obubini budibana.
4.95 · Izimvo eziyi-156
Nangona indawo yokuhlala iphakathi, indawo izolile. Ikota esempuma ekufutshane ineevillas ezinomtsalane kwaye ikulungele ukuthatha uhambo. Ukuba ukhetha ukuhamba emahlathini, naloo nto ikufuphi.
Ndiyafumaneka nanini na ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo kwaye ndikuncede ufumane indlela yakho ejikeleze isixeko ukuba kuyimfuneko. Ndiyayihlonipha indawo yeendwendwe zethu, kodwa ndihlala ndonwabile kukuncokola, ukubukela imuvi okanye ukusela.
Ndiyafumaneka nanini na ukuphendula nayiphi na imibuzo onokuba unayo kwaye ndikuncede ufumane indlela yakho ejikeleze isixeko ukuba kuyimfuneko. Ndiyayihlonipha indawo yeendwendwe…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Göttingen